Maxamed Dheere Iyo Prof. Geedi Oo Dantu Biday Iney Beel Ahaan Fooda U Geliyaan Khilaafka U Dheexeeya Garabyada Jowhar Iyo Muqdisho
Prof. Geedi ayaa la gelin siiyey in qarraxyadii dhacay loola jeedey in isaga lagu dilo, waxaana lagu abuuray uurkutaalo ah inuu cadowgiisu yahay hoogamiye kooxeedyada Muqdisho. Isagoo arrintaas ka duulaya ayuu warbaahinta dunida gaarsiiyey in lagu sameeyey isku day dil aan lagu guuleysan, isaga oo tilmaamey in kooxda Muuse Suudi iyo Qanyare ay ka dambeyeen shirqoolka lala damacsanaa in lagu dilo.
Wuxuu sheegay inuu Xamar u aadey inuu ka soo baaraan dego oo la falanqeeyo fikirkooda hogaamiye kooxeedyada ay garabkoodu ku soo rogeen xayiraada oo ay wax saameeyn ah ku yeelan weysey. Isagoo la hadlaya warbaahinta wuxuu yiri waxaan ka qaadaya kooxdaas tilaabo adag, isagoo cadeeyay inuu qaadayo talaabooyin culus oo uu kaga jawaabayo dhacdadii lagula kacay iyo madaxtaaga ay gooni isgu taagayaan Siyaasad ahaan kooxaha Muqdisho oo uu ku tilmaamay aabayaalka abaabulka qaska siyaasadeed iyo midka amaanka ee ka jira Soomaaliya . Isaga oo sii wata handadaadiisa wuxuu intaasi ku daray inaanu dulqaad intaa ka badan sameyn doonin, wixii hadda ka dambeeyna uu ka qaadayo kooxdaas waajibaadka ay tahay in la marsiiyo, isagoo hadalkiisa ula jeeda inuu xilka wasiirnimo ka qaadayo aduunkana ay ka codsanayaan in laga qaado tilaabo lagu ceebeynayo kooxdaas.
Maxamed Dheere oo aan ku farxin in Geedi Xamar laga soo cirdeeyo ayaa ku dhawaaqay in ay beeshiisu ka aarsaneyso kooxda Muqdisho dagaalkii ay kula kaceen Geedi oo soo kala firdhiyey taageerayaashii garabka Jowhar ee Col. C/llahi. Maxamed Dheere oo ku go’doomay Jowhar iyo siyaasada C/llahi Yusuf ayaa u muuqda mid aan laga jecleyn siyaasadiisa Muqdisho iyo beesha uu ka soo jeedo.
Waxaa la xaqiijiyey in shir Maxamed Dheere uu ku dalbaday in beeshiisu ay ka doodo waxa goor walba loo weeraro Geedi iyo waxa looga jeedo ama ay macnaheedu tahay inuu qabsoomi waayey. Qaban qaabada shirkaas ayaa laga sameeyey guriga mudane koogaar oo qasadka laga damacsanaa uu ahaa in fowdo la abuuro si ay isugu dhacaan beelaha dega Muqdisho.
Arintan garabyada is heysta ayaa waxay ku soo aadey xilli beesha caalamka, gaar ahaan Golaha Amaanka uu ka digay in labada dhinac ee kala degan Jowhar iyo Muqdisho khilaafkooda oo xoogeystey awgeed ay xal bidaan adeegsiga awood milatari oo ay ku tilmaameen mid aan xal soo kordhineyn, waxayna carabka ku dhifteen murugada xoogan oo ay ka qabaan dhaqdhaqaaqyada milatari iyo hadalada coladeed ama cagajugleynta ay warbaahinta isku dhaafsanayaan labadaas kooxood.
Ciilka heysta Maxamed Dheere ay ah mid uu ka dambeeyo Col. C/llahi oo ujeedadiisu ay tahay xoojinta dhacdooyinka sababi karta isku dhaca beelaha Muqdisho. Maxamed dagaal qabiil kuma helayo xal uu ku wayey walaaltinimo, mana ahan fikirka jowhar iyo waxqabad la’aantooda in isaga keliya uu dusha saarto oo uu keligiis u dagaalamo. Prof. Geedi kuma gaarayo xal dowlad aan jirin oo aan lahayn aqoonsi caalamiya inuu haddana taas ku daro xil ka qaadid iyo xil cusub magacaabid. Xalka uu ka wareeganayo wuxuu ku jiraa inuu iska casilo xilka uu la dhacdhacayo marba haddii dowladiisii ay shaqeyn weysey, ama waa inuu runta u soo laabto oo dagaalka ka dhexeeya C/llahi Yusuf iyo hogaamiye kooxeedyada muqdisho uu ka istaago meel dhexe, kana dhiibo garqaadasho qaladaadkii uu horay ugu kacay si uu u helo fursad uu ku dhexdhexaadin karo labada garab.